Ramaherison Hery Dimbiniaina: “…Tsy azo atao maimaika sy tefy manta ny sarimihetsika” | NewsMada
Manoloana ny firoboroboan’ny sarimihetsika amin’izao vanimpotoana izao sy noho ny fankalazana ny fahadimy taona nijoroan’ny OFM Madagascar izao dia nanokatra fiofanana manokana izy ireo ho an’ireo izay te ho matihanina amin’ny sehatry ny filalaovana sarimihetsika. Ankoatra ny fanamarihana io vanim-potoana io, mikendry ny hanondrotra hatrany ny kalitaon’ny sarimihetsika malagasy no anisan’ny antom-pisian’i OFM Madagascar raha ny fanazavan’ny tale jeneraliny.
“Manomboka efa mivoatra tsikelikely manaraka ny fivoaran’ny teknolojia ny tontolon’ny sarimihetsika Malagasy. Na izany aza, ilaina ny fiofanana mba hanome aina sy hitondra hafatra ho an’ny mpiara-belona ny zavatra atao. Efa mihatsara ny fitaovana, fa tsy azo atao maimaika sy tefy manta ny sarimihetsika fa mila fandrindrana tsara. Tanjona ny ho avo lenta ny vokatra malagasy, toa ireny sarimihetsika vahiny ireny mihitsy ary mba hankatoavin’ireo fahitalavitra vahiny ny vokatra Malagasy”, hoy ny tale jeneralin’ny OFM Madagascar, Ramaherison Hery Dimbiniaina.
Azo vinavinaina fa hisy ihany koa ny famokarana horonantsary lalaovin’ireo mpiofana ao amin’ny OFM Mada, raha ny fanazavan’ity tompon’andraikitra voalohany ity hatrany. Tafiditra ao anatin’ny fampiofanana rahateo ny “art dramatique” handiavana ny “master class”, ny senaristika, ireo fihetsika maro isan-karazany, sns, Eo koa ny fahalalana momba ny teatra. Iarahana amin’ireo matihanina efa milalao sarimihetsika mihitsy ity fiofanana ity, izay hotontosaina eny amin’ny foiben-toeran’ny OFM Madagascar, etsy Tanjombato. Ho an’izay liana, azo atao ny manoratra mivantana ao aminy tambajotran-tserasera fesiboky “OFM Madagasikara”. Tahaka izany ihany koa ireo izay vonona hanatsara hatrany ny sarimihetsika malagasy ka manana sosokevitra sy te hiaraka hiasa.
Marihina fa manome lanja ny kolontsaina ny ivontoerana, indrindra ny fampiofanana ireo mpanakanto amin’ny sehatra maro sy amin’ny fahaizana mitady lalam-barotra, ho tia karokaroka.